I-Sonication kuma-Multi-Neck Flasks - ama-Hielscher Ultrasonics
I-Sonication isetshenziselwa kakhulu ukusabela kwamakhemikhali kanye nezidakamizwa. I-Hielscher inikeza i-adapter ehlangene yomhlabathi ehambisanayo ukuze ifake i-sonotrode ye-ultrasonic ezitheni zokuphendula ezifana nama-flasks angaphansi-phansi, ama-multi-neck flasks kanye nezinye izinto zokulahlwa kwilabhu.
Ukusetha okunamandla kwe-an Ukukhipha, I-Soxhlet, I-Clevenger noma ukuphendula kwamakhemikhali Ama-apparatus ngokuvamile kudingeka ukuba umbhangqwana we-ultrasound ube isakhi seglasi. I-Sonication iqinisa futhi iqhume izinqubo zokukhipha kanye nokusebenza kwamakhemikhali okubangelwa isivuno esiphezulu, ikhwalithi engcono nokunciphisa isikhathi sokucubungula.
Ukuze kube nokusetha kwe-ultrasonic isikhumba, isib. Soxhlet noma i-Clevenger, iprosesa ye-ultrasonic ingaxhunyiwe entanyeni ehlangothini ye-flask. Intamo ephakathi isetshenziselwa ikholomu yokugcoba. Izinsizwa ezengeziwe ze-flask zingasetshenziselwa i-stirrer noma i-thermometer noma isetshenziselwe umbhobho ukuze uvumele ama-reactants ukuba angene kuwo.
Izinqubo ezijwayelekile zifaka:
Ultrasonicators for Laboratories
Hielscher Ultrasonics’ unikeza amadivaysi anamandla futhi asebenzayo ama-ultrasonic for lab kanye nembonini. Amadivaysi ethu e-ultrasonic asetshenziselwa izinhlelo zokusebenza eziningi ezifana ne-homogenization, ukusabalalisa, i-emulsification, isizinda, i-lysis & ukuhlakazeka, ukusabela kwe-sonochemical njenge-sono-synthesis ne-sono-catalysis.
I-Hielscher Ultrasonics izojabula ukukusiza ukusetha isethaphu sakho esihle sokukhipha kwakho noma ukuphendula kwamakhemikhali. Sicela uxhumane nathi futhi usazise mayelana nezidingo zakho!
I-Ultrasonicator UP200St ne-flask emithathu
Ama-Ground Glass Joints
Ama-ground glass joints asetshenziselwa ithuluzi elivamile ukuvumelanisa nokuxhuma ama-apparatus aqinile asebenza emabhakatheni ndawonye. Ama-flasks ephansi aphansi, ama-Liebig condensers, kanye ne-homogenizer ye-ultrasonic ingaba ephephile futhi ifakwe kalula ngokusebenzisa amakhemikhali angaphansi komhlaba, isib. Ukukhipha izinto ezivela emthini wesitshalo noma ukucubungula ingxube yokusabela.
Ama-flasks angama-rounded (eyaziwa nangokuthi ngezansi nxazonke noma ama-RB Flasks) yizinhlobo zeziglasi (izibuko) ezinama-spherical bottoms ezivame ukusetshenziswa njenge-glassware ye-laboratory, isb for reactments chemicals noma biochemical. Zakhiwa ngilazi ngenxa yezinkinga zamakhemikhali (isib. Ingilazi ye-borosilicate engapheli). Kukhona okungenani isigaba esisodwa se-tubular esaziwa njengentamo evulekile. Ama-flasks amabili, ama-three-ne-multi-necked necks ajwayelekile. Ama-flasks angaphansi-ngezansi atholakala ngobukhulu obuhlukahlukene, kusuka ku-5mL kuya ku-20L. Ezenzakalini zezimboni, ngisho nama-flasks amakhulu amakhulu afakwa.
Imikhawulo yezintamo ngokuvamile ihambisana nomzimba (wesifazane). Lezi zilinganiselwe, futhi zingakwazi ukuxhunyaniswa nokufakwa okuhambisana ne-tapered (male). I-Taper ejwayelekile 24/40 ivame ukufaka ama-250mL noma ama-flasks amakhulu, kuyilapho ubukhulu obuncane obufana no-14 no-19 busetshenziselwa ama-flasks amancane.
Ngenxa yecansi elizungezile, izindandatho zezinyosi zidinga ukugcina ama-flasks angaphansi aqondile. Uma isetshenziswa, ama-flasks angaphansi-phansi ajwayele ukugcinwa entanyeni ngokufaka izikhala emgqeni.
I-flasks ezimbili noma eziningi zentamo zisetshenziselwa:
Ukushisa noma / noma ukubilisa amanzi
Ngokufanayo ukupholisa kungenziwa ngokugoba okuyingxenye ebhodini lokupholisa, eligcwele isib. Amanzi abandayo, i-ice, ama-eutectic mix mixings, ice mix / solvent mixtures, noma i-nitrogen ye-liquid.